IZINTO EZILI-10 ZOKWAZI NGELIXA UKHETHA INKONZO YOKUBAMBA IWEBHU - ITEKNOLOJI
Izinto ezili-10 ekufuneka uyazi xa ukhetha inkonzo yeWebhu yokuHamba kwiWebhusayithi yakho
Siphila kwiminyaka yewebhu. Kungekudala okanye kamva uya kuzifumana ukwimeko apho kuya kufuneka uqwalasele ukwakha ubukho bakho kwi-Intanethi. Kulapho kuya kufuneka uqwalasele inkonzo yokubamba iwebhu.
Kukho iinkampani ezikhoyo phaya zizama ukukuhenda ngokuthembisa izinto ezinje ngezixhobo ezingenamda, i-24/7 yenkxaso yezobuchwephesha, phantse i-100% ixesha lokugqibela, njl.
Ke, nazi izinto ezili-10 ekufuneka ujonge kuzo ngaphambi kokujonga inkonzo ethile.
Baninzi ababoneleli beenkonzo ababonelela ngeenkonzo ezifanayo kumaxabiso ahlukeneyo.
Ewe zihlala zihlala zininzi izinto ezahlukeneyo ezimisela umahluko kwiinkonzo, kodwa kuya kufuneka ujonge ukujonga inani lokhetho olwahlukileyo ngaphambi kokukhetha enye.
Ukuba ubamba iphepha lewebhu elilula kwaye ungalindeli ukugcwala okuninzi ngaxeshanye okanye ibhendi; kusoloko kububulumko ukuhamba neenkonzo zexabiso eliphantsi ezikhoyo. Ukuba ujonge ukubamba iwebhusayithi enobunzima ngakumbi, jonga nezinye izinto.Intengiso
ukuzilolonga ukuze ulahlekelwe ngamanqatha engalo
2. Inkxaso yezobugcisa
Enye into ebalulekileyo ekufuneka uyikhangele yile tech inkxaso umboneleli unikezela. Le yinto enkulu kakhulu. Khawufane ucinge ukuba iwebhusayithi yakho iyehla ngeyure yokugcwala kwabantu kwaye awunalo nofifi lokuba kutheni okanye ungayilungisa njani ingxaki ngokukhawuleza.
phulukana ne-20 lbs ngenyanga
Ewe umntu unokuhlala ebhekisa kwiincwadana zenkxaso kodwa akukho nto iziva iqinisekisa njengokufumana umntu wokwenene onokuthetha naye ucele uncedo. Uninzi lweenkonzo ziyakuqinisekisa oku. Ke kuya kufuneka uqiniseke ukuba awuchazwanga kuyo.
Zininzi izinto ekufuneka ujonge kuzo. Umzekelo, ngaba ziyafumaneka nge-24/7? Ngaba umnxeba wasimahla?
Uninzi lwethu, eli candelo alinakwenza mahluko mkhulu kuba sijonge ukusingatha amaphepha amancinci ewebhu kunye nethrafikhi encinci ukuya kwinqanaba eliphakathi kunye ne-bandwidth eqikelelweyo. Nangona kunjalo njengoko ubunzima beprojekthi yakho yewebhu bonyuka kwaye kuya kufuneka wenze okungaphezulu kokuboniswa kwephepha elilula, kuya kufuneka uqale uqwalasele izixhobo zekhompyutha.
Ii-CPUs, ii-GPU, ii-RAM, kunye nohlobo loGcino (iSolid State Drive vs SATA) zizinto nje ezimbalwa. Yimalini ukubala esifunayo isicelo sakho sewebhu? Kwaye ulindele kangakanani ukugcwala kwabantu? Ezi zizinto ekufuneka uziqwalasele kwangaphambili.
4. Iimpawu ze-imeyile
Eli lelinye inqaku ekufuneka ulithathele ingqalelo. Ziziphi iimpawu ze-imeyile ezibonelelwa ngumboneleli? Nokuba ungavile / ufunde ntoni na malunga namajelo eendaba othathe indawo ye-imeyile yewebhu, ndithembe, i-imeyile isaya kwinxalenye enkulu yobukho bakho kwiwebhu.Intengiso
ulufikelela njani uxolo lwangaphakathi
Kufuneka uqiniseke ukuba inkonzo ye-imeyile oyifumanayo ngokusingathwa kwakho iza nezinto ezibalulekileyo njengokulawula ugaxekile, inqaku lokuhamba ngexesha njl. Njl. Ihlala isisigqibo sobulumko sokubuza umboneleli kwangaphambili.
5. Iphaneli yokulawula
Inkqubo ye- iphaneli yokulawula ujongano lomsebenzisi olisebenzisayo ukulawula / ukuphatha iwebhusayithi yakho. Enye enye into eyenziwa ngumnikezeli wakho we-web hosting kwaye kufuneka uqiniseke ukuba ufumana iipaneli zokulawula ezifanelekileyo.
Ukuba iphaneli yokulawula inzima kakhulu kwaye kufuneka ubize inkampani yokubamba ngalo lonke ixesha ufuna ukwenza utshintsho oluncinci olunokuba yingxaki enkulu kuwe.
Ke, qiniseka ukuba umboneleli wakho wenkonzo usebenzisa iCanel, iPlesk okanye iinkonzo ezifanayo. Ubuncinci qiniseka ukuba ipaneli yokulawula ayisiyonto ongenakuyifumana.
6. Kwabiwe ngokubucala
Le yenye into ekufuneka uyiqwalasele. Loluphi uhlobo lokusingatha olifunayo? Ukuba ujonge ukubamba iphepha lokubonisa elilula, uya kuthi ulunge ngenkonzo eyabelweyo yokubamba. Zitshiphu kwaye ubukhulu becala kulula ukuzisebenzisa nokujongana nazo.
Ngokusisiseko inkonzo eyabelweyo yokubamba kufana nokwabelana neseva nenani labanye abanini bewebhusayithi, uhlobo olufana nokwabelana ngekhompyuter yakho. Kodwa ukuba ujonge ukubamba ingcali ngakumbi okanye iwebhusayithi enzima ngakumbi, ukusingathwa ngasese yile nto uyifunayo.Intengiso
ukuba wenzeni ngexesha lokwahlukana
Banokuba nzima kancinci ukusebenza nabo kwaye babiza kakhulu kodwa lixabiso ohlawula lona ngokubamba ngobungcali ngakumbi.
Le yenye into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele xa uneshishini lakho engqondweni. Ukuba ubamba i ishishini elikhulayo , unokulindela ukuba ubukho bakho bewebhu bukhule nayo. Kwaye ubukho bewebhu obukhulayo budinga ukuphuculwa kwenkonzo yakho. Oku kubandakanya yonke into ukusuka kwizixhobo zakho zokusebenza ukuya kwinkxaso yezobuchwephesha.
Ngapha koko ezinye iinkonzo ezinje ngeeNkonzo zeWebhu zeAmazon zibonelela ngokuzenzekelayo, oko kuthetha ukuba inkqubo yakho ihlaziywa ngokuzenzekelayo ukuba inkqubo yakho yangoku ayinakho ukuphatha ukugcwala kwabantu / ubungakanani bebhendi engenayo. Ngapha koko kufuneka uqiniseke ukuba loluphi uhlobo lwenkonzo yokunikezelwa ngumnikezeli wakho.
Eli luphawu olubaluleke kakhulu. Khawufane ucinge ukuba kuya kwenzeka ntoni ukuba onke amanqaku ewebhu, iiposti kunye nolunye ulwazi olunokuthi lususwe ngenxa yengozi ethile. Uninzi lwababoneleli beenkonzo bazama ukwenza ukuba izibonelelo zabo zithembeke kakhulu, kodwa akukho mntu uceba iingozi.
Umzekelo, unokucima ngempazamo umxholo ngokwakho. Kuzo zombini iimeko, uninzi lwababoneleli beenkonzo zokusingathwa kwewebhu banikezela ngenkxaso yokuqina. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba neyakho iyenza. Buza umntu oza kuba ngumboneleli malunga nesicwangciso sabo sokubuyiselwa kweentlekele. Umboneleli omnye wokubamba iindwendwe, I-Orenji encinci , umzekelo, yenza i-backups ezenzekelayo yasimahla yonke imihla.
9. Inkonzo yokupaka
Olu luhlobo lwebhonasi kodwa luphawu olukhulu ukuba nalo. Fumanisa ukuba umboneleli wakho unokupaka amanye amagama wesizinda sakho. Kwabaninzi bethu oku kungangabonakali ngathi yinto enkulu kodwa kunokuthetha lukhulu ukuba uqhuba ishishini.Intengiso
ukuba ngumzali olungileyo
Uninzi lweshishini luthanda ukuthenga amagama amaninzi e-domain, ihlala i-misspellings, amanye amagama njl njl. Ngeenkonzo zokupaka unakho konke oku phantsi kwepaneli yokulawula. Le yinto enkulu ngokudibanisa nolawulo lwebrand. Kwaye kukwayindlela entle yokuqinisekisa ukuba awusoze uphulukane nezithuthi.
10. Isicwangciso sokuphuma
Le inkulu. Unokwaneliseka ngumboneleli wakho wangoku kodwa ekuhambeni kwexesha unokutshintsha ingqondo. Unokufuna ukusingatha iwebhusayithi yakho kwenye indawo kwenye imeko kwaye kule meko kuya kufuneka ubenakho ukukwenza oko ngokungahambi kakuhle. Kuya kufuneka ubengcono ekukhetheni ababoneleli ababamba njengaye Arvixe ezinikezela ngokuhambisa iwebhusayithi simahla xa usuka kwenye indawo.
Qiniseka ukuba ufunda izivumelwano zokuqala kubandakanya ukuprinta okufanelekileyo ngokufanelekileyo kwaye uqiniseke ukuba umboneleli wakho wenkonzo yokubamba iwebhu ubonelela ngesicwangciso esiphumayo sokuhamba. Ndithembe, oku kubaluleke ngakumbi kunokuba ucinga ukuba kunjalo.
Khawufane ucinge ngento enokwenzeka kwishishini lakho ukuba iwebhusayithi yakho ibizokuhla iintsuku ngenxa yokuba umboneleli wakho wangoku efuna ukwenza kube nzima ukuba uhambe. Awunayo loo nto!
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: IiPexels ngestatic.pexels.com
Iicawa ezinikezela ngengcebiso yasimahla kufutshane nam
wenzeni xa ungaphangeli
usenza njani isisu sakho sizive ngcono
zithini iimpawu zeqhawe
iindlela zokunonga ulwalamano lwakho
Ukuba Ngumzali 20 Into Imvelisogadget I-Smartcut Ukufunda